Child – Page 30 – Healthy Life Journal
အားဆေးထိုးခြင်းနှင့် အားဆေးသောက်ခြင်း ကွာခြားချက် သိပ်မရှိ
ယခင်က အားဆေးထိုးမှ အားရှိသည်ဟူသော အယူအဆတစ်ရပ် လူအများကြား ပျံ့နှံ့ခဲ့ရာ အားဆေးထိုးခြင်းနှင့် အားဆေးသောက်ခြင်းသည် အမှန်တကယ်တွင် ကွာခြားချက် သိပ်မရှိကြောင်း ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခဦးကိုကိုက ဆိုသည်။ “အားဆေးထိုးတာနဲ့ အားဆေးသောက်တာက အမှန်တကယ်တော့ သိပ်မကွာပါဘူး။ အားဆေးထိုးတယ် ဆိုတာက...
သင့်မွေးနေ့အရ သင့်အကြောင်း ပြောပြမယ်
ငွေကြယ်စင်ယံ သင်က ၁၉၆၀ ဇွန်လ ၇ ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားသူ ဖြစ်တယ်ဆိုရင် သင့်မွေးနေ့က ၇ရက်နေ့ပါ။ အဲဒီ မွေးနေ့ပေါ်မူတည်ပြီး သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး လက္ခဏာက ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ – သင်က ၁ ရက်နေ့ မွေးသူဖြစ်လျှင် ကောင်းတဲ့ အချက်တွေက...
သင့်ကလေး ထက်မြက် ၊ အောင်မြင်လာစေရန် ပြုစုပျိုးထောင်နည်းများ-၄
ပါမောက္ခဒေါက်တာ နီလာကြူ ( စိတ်ပညာပညာရှင် ပါမောက္ခ ဌာနမှူး၊ စိတ်ပညာဌာန ရန်ကုန်နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) ကလေးတွေ လိမ္မာထက်မြက်ပြီး အောင်မြင်တဲ့ လူကြီးလူကောင်းတွေ ဖြစ်လာစေဖို့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး (Personality)၊ ဉာဏ်ရည် ( Intelligent)နဲ့ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်စေ့ဆော်အား (Motivation)တွေလိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ မျိုးရိုးဗီဇနဲ့...
ခြေသည်း၊ လက်သည်း ပိုးဝင်ခြင်း
ဒေါက်တာ မြတ်စန္ဒာကျော် အရေပြား အထူးကုဆရာဝန်ကြီး၊ ပါမောက္ခ၊ အရေပြားဌာန၊ မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. ခန္ဓာကိုယ်မှာ လက်သည်းတွေက ဘယ်လိုအရေးပါ အရာရောက်ပါသလဲ ဆရာမ။ ဖြေ. လက်သည်းတွေရဲ့ လုပ်ငန်းက ကိုင်တွယ်ဖို့နဲ့ ကာကွယ်ဖို့အတွက် အရေးကြီးလှပါတယ်။ လက်သည်းတွေဟာ ကျန်းမာပြီး...
သင့်ကလေး ထက်မြက်၊ အောင်မြင်လာစေရန် ပြုစုပျိုးထောင်နည်း ၃
ပါမောက္ခဒေါက်တာနီလာကြူ (စိတ်ပညာရှင်ပါမောက္ခ ဌာနမှူး စိတ်ပညာဌာန ရန်ကုန်နှင့်တွေ့စုံဆွေးနွေးခြင်း) (၃) အပြုအမူနှင့်ဆိုင်သော ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း တစ်ခါတလေ ကလေးကို အုပ်ထိန်းရာမှာ စောစောကနည်းနှစ်မျိုးစလုံးနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျ မဖြစ်တာမျိုး၊ အဆင်သင့် ဖြစ်မနေတာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ သူတို့လုပ်တဲ့ အပြုအမူပေါ်မှာ သိပ်မပြင်းထန်တဲ့ အပြစ်ပေးမှုတွေလုပ်ဖို့...
ပျော်ရွှင်ပါစေ ကလေးရေ . . .
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) “ပန်းပျိုးသူစာသင်ဝိုင်း” ပရဟိတညီအစ်ကို မောင်နှမများအကြောင်း ကြားဖူးခဲ့သည်မှာ အတော်ပင်ကြာခဲ့ပြီ။ မန္တလေး ရွှေပြည်မိုး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် ကျောင်းမနေနိုင်သည့် ကလေးများသာမက ကျောင်းနေနိုင်သော်လည်း ကျောင်းဆင်းချိန်တွင် ပန်းရောင်းရရှာသည့် ကလေးများကိုယ်စား ပန်းရောင်းပေးရင်း စာသင်ကြားပေးနေသည့် ပရဟိတ အဖွဲ့လေး၊ ကိုယ်ကျိုးမဖက်ဘဲ...